MYU SHADAN: February 2013
Posted by myu shadan at 11:58 PM No comments:
ရန်ကုန်မြို့လယ် ဆူးလေဘုရားလမ်းပေါ်က ကျောက်တံတား ရဲစခန်း ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်းများကို မြင်ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – စတိဗ် တစ်က်နာ / ဧရာဝတီ)
အခွံနွှာပြီးသား အုန်းသီးလုံး အရွယ်အစားရှိတဲ့ အမွှေးထူထူ အနက်ရောင် မြို့ကြွက်တွေကို လူတယောက် ဝင်ရုံသာဆံ့တဲ့ တန်းလျား ရေချိုးခန်းမှာ သိုင်းကွက်နင်းသလို ရှောင်နေရတာက အသက် ၆၀ အရွယ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သူ့အတွက် မထူးဆန်းတော့။
ဒါ့အပြင် ကိုလိုနီခေတ် အချိန်ဝန်းကျင်ကတည်းက ဆောက်လုပ်ထားခဲ့တယ်လို့ မသေမချာ ကြားဖူးနားဝ သူသိထားတဲ့ မိသားစု ၄ ယောက် နေသာရုံ ဆယ်ပေပတ်လည် အခန်းထဲမှာ အနှစ် ၃၀ နီးပါး နေခဲ့ရတာဟာလည်း သူ့အတွက် နေသားကျနေပါပြီ။
ဒီ ဆယ်ပေပတ်လည် အခန်းကျဉ်းလေးဟာ သူ့မိသားစုရဲ့ ထမင်းဝိုင်း နေရာလည်းဖြစ်သလို၊ တနေ့တာ ပင်ပန်း နွမ်းလျ မှုတွေအတွက် အိပ်စက် အနားယူတဲ့ အိပ်စရာနေရာလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီနေရာကျဉ်းလေးဟာပဲ နေ့လယ် နေ့ခင်း ဘက်တွေမှာ ဧည့်သည် ဧည့်ခံရာ ဧည့်ခန်းနေရာလည်း ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။
အပြင်ပန်း ပုံသဏ္ဍာန်အားဖြင့် ကြည့်မယ်ဆိုရင် ရှေးခေတ် တိုက်အိုကြီး တလုံးဆိုပေမယ့် ဒီဘက်ခေတ်ရဲ့ အရည်အသွေး မကောင်းတဲ့ အထပ်မြင့် တိုက်တွေလောက်ကိုတော့ ဒီတိုက်အိုကြီးကမမှုလောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် တိုက်အိုကြီးရဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာ လှေကား အတက်အဆင်း မျက်နှာကျက်တွေဟာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်တွေမှာ အုတ်သားတွေ ကွာကွာ ကျလာတာကို ရှောင်ရှား ရတာကတော့ သူ့အတွက် အလေ့အကျင့် တခုဖြစ်လို့နေပါပြီ။
ဒါကတော့ ရန်ကုန်မြို့လယ်က ရဲတပ်ကြပ်တဦးရဲ့ ဇနီးတယောက် မိသားစုနဲ့အတူ ရဲဝန်ထမ်း တိုက်မှာနေ နေရတဲ့ ပြဿနာ တွေ အများကြီးထဲကမှ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဖြစ်စဉ်အနည်းငယ်ကို ဖော်ပြလိုက်တာပါ။
ဒီရဲစခန်းကြီးဟာ ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်က အထပ်မြင့် အဆောက်အဦးသစ်တွေ အကြားမှာ မခန့်သလို ဖြစ်နေရတဲ့ ကျောက်တံတား ရဲစခန်းတည်ရှိရာ အဆောက်အဦး အိုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ရဲဝန်ထမ်းတဦးရဲ့ မိသားစုဘဝလို နောက်ထပ်အလားတူ ရဲဝန်ထမ်း မိသားစုတွေ အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။
ယခင် စစ်အစိုးရ လက်ထက် ကတည်းက သူတို့ရဲ့ နာမည်ကြားရုံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား တော်တော်များများရဲ့ မနှစ်မြို့ခြင်းကို ခံနေရဆဲဖြစ်တဲ့ အောက်ခြေအဆင့် ရဲဝန်ထမ်းတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့မိသားစုဘဝတွေဟာ လက်တွေ့မှာ ရပ်တည်ရေးအတွက် ခက်ခဲ လွန်းနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နိုင်ငံရဲ့ အရေးကြီးဆုံး တာဝန်တွေထဲကမှ တခုဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ့ရဲ ဝန်ထမ်းတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေရပေမယ့် သူတို့ တော်တော်များရဲ့ ဘဝတွေဟာ ဘာအာမခံချက်မှ မရှိဘူးလို့ ရန်ကုန်မြို့မှာ နေထိုင်တဲ့ အသက် ၄၀ အရွယ် ရဲဝန်ထမ်း တဦးက ဆိုပါတယ်။
ဧရာမ ကြွက်ကြီးတွေနဲ့ မိတ်ဆွေသဖွယ် အတူယှဉ်တွဲပြီး ဆယ်ပေပတ်လည် အခန်းကျဉ်းအတွင်း မိသားစုလေးငါးခြောက် ယောက် နေထိုင်ရခြင်းဆိုတဲ့ အနေအထိုင် ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတွေအပြင် အထက်အရာရှိကို မလွန်ဆဲရဲတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ တခြား ပြဿနာပေါင်းများစွာတွေကိုလည်း နေ့စဉ်ဆိုသလို ရဲဝန်ထမ်းတွေ ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။
“ဒီကြွက်ကြီးတွေကတော့ ကျမတို့အတွက် ရိုးနေပါပြီ။ ကျမလို အသန့်ကြိုက်တဲ့သူတောင် ဒီကြွက်တွေကို မထူးဆန်း တော့ပါဘူး။ အခန်းက ကျဉ်းလိုက်တာဆိုပြီး မနေချင်လို့မှမရတာ။ ဒီလိုပဲ နေလာရတာ နှစ်သုံးဆယ်ပဲ ပြည့်တော့မယ်” လို့ အသက် ၆၀ ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ရဲဝန်ထမ်းရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူက ရယ်ရယ်မောမော ဆိုပါတယ်။
အထက်အရာရှိ များရဲ့ အမိန့်အာဏာကို မလွန်ဆန်ရဲတဲ့ ရဲဝန်ထမ်းနဲ့ သူတို့မိသားစုတွေရဲ့ အနေအထားက မြို့လယ်ခေါင် တည့်တည့်မှာ ဧရာမကြွက်ကြီးတွေနဲ့ အတူနေထိုင်ရတဲ့ အခြေအနေလိုပဲ ဆိုးဝါးတယ်လို့ ရဲဝန်ထမ်းတဦးက ဆိုပါတယ်။
“မြို့လယ်ခေါင်မှာနေပြီး ကြွက်လည်းကြောက်ရ၊ အထက်လူကြီးလည်း လန့်နေရ၊ သူတို့မိန်းမတွေကိုလည်း ကြောက် နေရတာပါ” လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ သာမန် ရဲဝန်ထမ်းတွေဟာ မြို့နယ်မှူးအဆင့်နဲ့ ခရိုင်မှူးအဆင့်ရှိတဲ့ သူတို့ရဲ့ အထက်လူကြီးတွေက အာဏာနဲ့ခိုင်းစေတဲ့ တာဝန်မဟုတ်သော အလုပ်များကို တာဝန်ချိန်များမှာလည်း လုပ်ပေးနေရတယ်လို့ ကျောက်တံတား မြို့နယ်မှာ တာဝန်ကျတဲ့ ရဲဝန်ထမ်းတဦးက ဆိုပါတယ်။
အောက်ခြေရဲဝန်ထမ်းတွေကို မြို့နယ်မှူးအဆင့် ရဲအရာရှိတွေက မှုခင်းဂျာနယ်တွေ ရောင်းခိုင်းတာမျိုး၊ သူတို့ အိမ်ကလုပ်တဲ့ မုန့်တွေကို မဝယ်မနေရ လက်ငင်း ငွေချေစနစ်နဲ့ ရဲဝန်ထမ်းတွေကို တဆင့် ပြန်ရောင်းခိုင်းတာမျိုးတွေ ပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကျောက်တံတားမြို့နယ်က ရဲဝန်ထမ်းတဦးက “အထက်အရာရှိက ကျနော်တို့အောက်ခြေ ဝန်ထမ်း တွေကို မှုခင်းဂျာနယ်တွေ ရောင်းခိုင်းတယ်၊ သူတို့လုပ်တဲ့ ပဲမုန့်တွေကို အတင်းယူပြီး ရောင်းခိုင်းတယ်။ ကျနော်တို့က အဲဒါတွေကို အရင်ဆုံး သူတို့ကို လက်ငင်း ပိုက်ဆံရှင်းပေးရတယ်။ မယူချင်လို့မရဘူး။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ရဲတွေမှာ သူတို့ ထိုးရောင်းတဲ့ ဂျာနယ်တွေ၊ မုန့်တွေ အပြင်မှာ ရောင်းမကုန်ရင် အလကားသက်သက် ပိုက်ဆံရှုံးတယ်ဗျာ” လို့ ပြောပါတယ်။
အခုလို ပြဿနာတွေအပြင် စခန်းမှူးကတော်၊ မြို့နယ်မှူး ကတော်တွေရဲ့ အာဏာနဲ့ ခိုင်းစေမှုတွေကိုလည်း ရဲဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ဇနီးသည်တွေက မကြာခဏဆိုသလို ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ သိရတယ်။
“ကျမတို့နေရတော့ တော်တော် စုတ်စုတ်နေရာမှာ။ ကတော်တွေ ဒီကိုလာမယ်ဆို ဘုရားပန်းလဲထားရ၊ အိမ်က ကလေးတွေကို အဝတ်သန့်သန့် ဝတ်ပေးရနဲ့ မလိုတာတွေ တကယ်လုပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စခန်းမှူးကတော်တွေက ခဏခဏ ဟိုကြေး၊ ဒီကြေးနဲ့ ပေးရတာတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ ကျမတို့ရဲမိန်းမတွေက ယောင်္ကျား လုပ်စာ မလောက်မငှလို့ အပြင်ထွက် ဈေးရောင်းရပါတယ်ဆိုမှပဲ ရဲစခန်းထဲ အလှည့်ကျ ကင်းစောင့်ပေးရတာ ရှိသေးတယ်” လို့ ရန်ကုန်မြို့လယ် ရဲစခန်းတခုက ရဲဝန်ထမ်းတဦးရဲ့ အသက် ၃၀ အရွယ် ဇနီးသည်တဦးက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ခရိုင်မှူးအဆင့်ရှိတဲ့ ရဲအရာရှိတွေကို နယ်ထိန်းတာဝန်ကျ ရဲဝန်ထမ်းတွေက တလတကြိမ် သတ်မှတ်ငွေ ထည့်ဝင်ပြီး ကန်တော့ရတဲ့ အခြေအနေတွေလည်း ရှိသေးတယ်လို့ ရဲဝန်ထမ်းတွေဆီက သိရပါတယ်။
“ရန်ကုန်မှာမှ မဟုတ်ဘူး။ နယ်တွေမှာလည်း အောက်ခြေ ရဲဝန်ထမ်းတွေ ဘယ်လိုနေရ နေရ အထက်က ဂရုမစိုက်ဘူး။ရန်ကုန်မှာဆို ပိုဆိုးတယ်။ တချို့ ရဲစခန်းတွေကျတော့ အထပ်မြင့် တိုက်ခန်းတွေ ဆောက်ပေးထားတယ်။ တော်တော် များများ ရဲစခန်းတွေကတော့ စုတ်ချာလွန်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ နေနေရတဲ့ ဘဝက ရဲဆိုတဲ့ နာမည်ကြားရုံနဲ့ လူတွေ နှာခေါင်းရှုံ့ခံရ တာတွေနဲ့တော့ အသားကျနေပါပြီ” လို့ လှိုင်မြို့နယ် ရဲ စခန်းက ရဲဝန်ထမ်းတဦးက ပြောပါတယ်။
ရဲအရာရှိ အများစုဟာ အကျင့်ပျက် ချစားမှုတွေကို ပြောင်ကျကျ ပြုလုပ်နေကြ ပေမယ့် ရပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ အောက်ခြေ ရဲဝန် ထမ်းတွေရဲ့ လစာဝင်ငွေတွေကတော့ သူတို့မိသားစုကို လုံလုံလောက်လောက် ထောက်ပံ့မပေးနိုင်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ကျပ် ၄ သောင်းကနေ ၇ သောင်းအထိသာ အမြင့်ဆုံးရရှိတဲ့ သာမန်တပ်ကြပ်အဆင့် ရဲဝန်ထမ်းတွေဟာ အများပြည်သူဆီက အဂတိလိုက်စားဖို့ အခွင့်အလမ်းတောင် မရှိသလောက်ဘဲလို့ ပုစွန်တောင်မြို့နယ် ရဲစခန်းက ရဲတပ်ကြပ် တဦးက ပြောပါတယ်။
“နယ်ထိန်း ဖြစ်ရင်တော့ ကိုယ်ရတဲ့ နယ်မြေမှာ ရပိုင်ခွင့်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီအပိုင်းမှာ ရာနှုန်းပြည့် ရိုးရိုး သားသား လုပ်ပါတယ် ဆိုတာ ရှားပါတယ်။ တချို့ ရဲဝန်ထမ်းတွေ ကျတော့လည်း နည်းနည်းပါးပါးလောက်ပဲ ယူကြပါတယ်။ အဲဒီလိုမှမယူရင် ကျနော်တို့တွေမှာ ရတဲ့လစာနဲ့က မလောက်ဘူး။ လစာတွေသာ ကောင်းနေရင် ဒီလိုအဖြစ်တွေလည်း ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ” လို့ ရန်ကုန်မြို့မှာ နေထိုင်တဲ့ ရဲဝန်ထမ်းတဦးက ဆိုပါတယ်။
တရိပ်ရိပ် တက်လာတဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေရဲ့ နောက်ကို လိုက်မမီနိုင်ဆဲ ဖြစ်နေသည့် တခြားသာမန် အစိုးရဝန်ထမ်း တွေလိုပဲ ရဲဝန်ထမ်း မိသားစုဝင်တွေဟာလည်း တဘက်တလမ်းကနေ ဝင်ငွေရရှိဖို့ စီးပွားရှာကြရတယ်လို့ ရဲမိသားစုဝင်တွေ ဆီက သိရပါတယ်။
“ကျမ အမျိုးသားရတဲ့ ဝင်ငွေက တလ ကျပ် ၆ သောင်း။ ရဲလုပ်သက်က ဆယ်နှစ်ကျော်ပြီ။ သူ့လစာက မိသား စုကို မထောက်ပံ့နိုင်တော့ ကျမအပါအဝင် သားသမီး ၂ ယောက်စလုံး အပြင်အလုပ် ထွက်လုပ်ရတယ်။ ရဲတွေက ပိုက်ဆံရပါတယ်၊ ရပါတယ်ဆိုတာ သာမန်ရဲဝန်ထမ်းတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကို သိစေချင်တယ်” လို့ အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ရဲဝန်ထမ်းတဦးရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူက ပြောပါတယ်။
ရဲယူနီဖောင်းတွေကိုလည်း သူတုိ့ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေနဲ့ ချုပ်လုပ်ဝတ်ဆင်ရပြီး ငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့ ရဲဝန်ထမ်းတွေ အတွက် ကတော့ စုတ်ချာလွန်းတဲ့ ဘွတ်ဖိနပ်တရံကိုပဲ အမြဲအသုံးပြုနေရပါတယ်လို့ အထက်ပါ အမျိုးသမီးက ဆိုပါတယ်။
“လူကြီးလမ်းကြောင်းတွေရှိရင် ဝတ်ရတဲ့ ခါးရှည် ယူနီဖောင်းတွေကို ကိုယ့်ဘာသာ ဝယ်ဝတ်ရတာ။ ဖိနပ်လည်း ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ပဲ။ ရဲ ခါးပတ်လည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ။ အများစုကတော့ မတတ်နိုင်ကြလို့ ကျနော်တို့ အောက်ခြေ ရဲတွေရဲ့ အသွင်အပြင်က အမြဲတမ်း မသားမနား ဖြစ်နေရတယ်” လို့ လှိုင်မြို့နယ် ရဲစခန်းက ရဲတပ်ကြပ် တဦးက ပြောပါတယ်။
အစိုးရဆီက ရရှိတဲ့ လစာဝင်ငွေဟာ ကျပ် ၁ သိန်းမပြည့်ပေမယ့် တရားခံတွေကို ရုံးထုတ်တဲ့အခါ ရှိလာတဲ့ ကုန်ကျစားရိတ်၊ တရားခံတွေ သွားရောက် ဖမ်းဆီးတဲ့အခါ ကုန်ကျတဲ့ စားရိတ်တွေကိုလည်း ရဲဝန်ထမ်းတွေ အိတ်စိုက်ရတယ်လို့ ရဲဝန်ထမ်း တွေက ဆိုပါတယ်။
“သန်လျင်ကို တရားခံ သွားထုတ်ရတယ်။ အသွားအပြန် ကားငှားရတယ်။ ကျပ် တသောင်းကျော် ကျတယ်။ ပြန်ထုတ် လို့မရဘူး။ ပြောလို့လည်း မရဘူး။ ဘာမှလည်း မတတ်နိုင်ဘူး” လို့ အထက်ပါ ရဲဝန်ထမ်းတွေထဲက တဦးက ပြောပါတယ်။
အခက်အခဲပေါင်း များစွာကို နေ့စဉ်ရင်ဆိုင် ကျော်ဖြတ်နေရတဲ့ သာမန်ရဲဝန်ထမ်းတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့မိသားစုဘဝတွေဟာ အစစအရာရာ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာပြီ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိနေပြီဆိုတဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးမှာ မပြောင်းမလဲ အရင်အတိုင်း ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့လယ် တိုက်သစ်တွေကြားက ဟောင်းနွမ်းနေပြီဖြစ်တဲ့ ကျောက်တံတားရဲစခန်း ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်းတခု မှာတော့ ရဲတပ်ကြပ်ကြီးရဲ့ အသက် ၆၀ အရွယ် ဇနီးဖြစ်သူက ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ပင်စင်ရမယ့် မကြာတော့မယ့် အချိန်တခုကို ကြွက်တွေနဲ့ အတူ နေထိုင်ရင်း စောင့်မျှော် နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
(Madat yu ga, saw lajin ai ) Meeting With Thura Shwe Mann, House Speaker, in Myitkyina92 13
Posted by myu shadan at 2:31 PM No comments:
(JP kasa) ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ မြောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၁) လက်အော်၊ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၁၀) ဒေသဖြစ်သော ချီဖွေနှင့် ဆော့လော်ကြားတွင် ဖေဖော်ဝါရီ (၂၃) ရက်မနက် (၈း၀၀) နာရီခန့်တွင် ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာစစ်တပ်များ တိုက်ပွဲ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၁၀) မှ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာအစိုးရတပ် ခလရ (၂၉) တို့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်သိရှိရပါသည်။
Posted by myu shadan at 2:13 PM No comments:
တပ်သားတိုးရေး အလေးပေး၍ ကလေးစစ်သား များလာရဟု အစီရင်ခံစာဆို
မြန်မာ့ တပ်မတော်အတွင်း တပ်သား တိုးပွားရေးကိုသာ အရေးထား ဆောင်ရွက်ခဲ့၍ ကလေးစစ်သား အသုံးပြုမှုများ ရှိနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာတရပ်က ဆိုသည်။
‘မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကလေးစစ်သား စုဆောင်းခြင်းနှင့် အသုံးပြုမှု အဆုံးသတ်ခြင်း’ ဟူသည့် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကလေးစစ်သားဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ (CSI)မှ ဇန်နဝါရီ လကုန်ပိုင်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် သုသေသန စာတမ်းတွင် သုံးသပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
“အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှု အားနည်းခြင်းနှင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား အရေးမယူဘဲ တပ်ဖွဲ့ဝင် အရေအတွက် မြင့်မားရေးကိုသာ အစဉ်တစိုက် အလေးထား လုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် တပ်မတော် (ကြည်း) အတွင်း ကလေးစစ်သား စုဆောင်းမှုနှုန်း မြှင့်မားလာစေခြင်းဖြစ်ကြောင်း” ဟု အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြထားသည်။
အသက်စိစစ် အတည်ပြုသည့် စနစ် အသုံးပြုခြင်း၊ ကလေး စစ်သား စုဆောင်းမှု ပြုလုပ်စေသည့် မက်လုံးများ
ပေးခြင်းကို မြန်မာ့တပ်မတော်အနေဖြင့် ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ကြောင်းလည်း အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။
“နိုင်ငံရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ တွေမှာ အနည်းငယ်တိုးတက်မှု ရှိလာပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲမှု အစီအစဉ်မှာ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးတွေကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ကိစ္စကို အရေးကြီးဆုံး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအဖြစ် မြန်မာအစိုးရနဲ့
နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက သေချာစွာ ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ပါ တယ်” ဟု CSI ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူး Richard Clarke က ဆိုသည်။
စာမျက်နှာ ၄၀ ပါ ထိုစာတမ်းကို မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှ ကုလသမဂ္ဂမှအရာရှိများ၊ နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ဲ့မှ အရာရှိများ၊ သံအမတ်များ၊ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမှ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကလေး စစ်သားဟောင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများကို တွေ့ဆုံမှုများပြုလုပ်၍ CSI အဖွဲ့က သုသေသနပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံကိုပေးသော နိုင်ငံတကာ အကူအညီများကို ကလေးများအား စုဆောင်းခြင်းနှင့် တိုက်ပွဲများတွင် ကလေးစစ်သားများကို အသုံးပြုခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်းတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုရန်” ဟု အကြံပြုထားသည်။
တပ်မတော် (ကြည်း)တွင် စုစုပေါင်း ကလေးစစ်သား အရေအတွက် မည်မျှရှိသည်ကို ဖော်ပြရန် အလွန် ခက်ခဲပြီး ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုး၏ ကလေးနှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာတွင် အသက်အရွယ် မပြည့်သည့်သူများ စစ်သားစုဆောင်းခံရ၍ တိုင်ကြားမှုများ ဆက်လက် မြင့်တက်နေဆဲဟု ဆိုသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လက ကလေးစစ်သားစုဆောင်းခြင်းနှင့် အသုံးပြုမှု အဆုံးသတ်ရန် မြန်မာအစိုးရ နှင့် ကုလသမဂ္ဂ အကြား သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
“ပထမဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ် ကုလသမဂ္ဂနှင့် အခြား လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အေဂျင်စီတွေ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များရှိရာသို့ လွတ်လပ်စွာ သွားလာနိုင်ခွင့် ထွက်မလာပါက ရေရှည်တည်တံ့စွာ အကာအကွယ်ပေးနိုင်မှု အခွင့်အလမ်း ဆုံးရှုံးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု Richard Clarke က ပြောသည်။
မြန်မာ သမ္မတ အကြံပေး အရာရှိများ၊ ကလေးစစ်သားစုဆောင်းမှု တားဆီးရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊
ရှေ့နေချုပ်၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနများမှ သက်ဆိုင်ရာ အရာရှိများနှင့် တွေ့ဆုံခွင့်
တောင်းခဲ့သော်လည်း ခွင့်မရခဲ့သလို အစီရင်ခံစာ မူကြမ်းအား မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေး ဌာနသို့ ပို့၍ ထင်မြင်ချက်
တောင်းခံခဲ့သော်လည်း ပြန်စာမရခဲ့ကြောင်း CSI က ဆိုသည်။
CSI သုတေသနပြုချက်တွင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များအနက် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး/ ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ် (KNU/KNLA) နှင့် ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် (DKBA) တို့ အကြောင်းကို အဓိကထား ရေးသားထားသည်။
“KNLA ၏ စစ်သားစုဆောင်းရေးမှုများတွင် စိတ်ချရသော အသက်မှန် အတည်ပြုခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ မရှိသည်ကို တွေ့ရသည်” ဟု ထောက်ပြထားသည်။
ထို့ပြင် “ကလေးများနှင့် သူတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မိသားစုကို တပ်မတော် (ကြည်း)၏ ရန်မှ ကာကွယ်ရန်၊ လက်စားချေရန်၊ တိုင်းရင်းသားလက္ခဏာနှင့် တိုင်းရင်းသားဖြစ်မှုတို့ကို အစိုးရမှ အသိအမှတ်ပြုရန် စသော ရည်ရွယ်ခံစားချက်များမှာလည်း ကလေးများကိုယ်တိုင် သဘောတူသဖြင့် စုဆောင်းခြင်းဖြစ်သည်” ဟု ဆိုထားပြီး “ခူမှုရေးဖိအားပေးမှုများနှင့် စစ်မိန့်များ၏ တာဝန်ပေးမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်” ဟုလည်း CSI က ဆိုသည်။
သို့သော် အခြားလက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်း အားလုံးနှင့် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များ၏ အခြေအနေ ကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ခြုံငုံတင်ပြထားခြင်း မရှိကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဝန်ခံထားသည်။
ကလေးစစ်သား ဟူသည်မှာ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်
နေသော ကလေးငယ်များကို ကလေးစစ်သားအဖြစ် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပြီး ကလေးငယ်များ၊ မိန်းကလေး၊
ယောက်ျားလေးဟု ကန့်သတ်မထားပဲ တိုက်ခိုက်ရေး သမားများ၊ ချက်ပြုတ် သူများ၊ ပစ္စည်းထမ်းသူများ၊ သူလျှိုများအဖြစ် သို့မဟုတ် လိင်မှုဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အသုံးပြုရန် စုဆောင်းခံထားရသောအသက် ဆယ်ရှစ်နှစ်အောက် အရွယ် မည်သူ့ကိုမဆို ရည်ညွှန်းကြောင်း သိရသည်။
ကုလသမဂ္ဂနှင့် အစိုးရတို့ အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ်အောက်ရှိ အစိုးရ၏ လုပ်ဆောင်မှုများ အပေါ် ထိရောက်မှုရှိမရှိကို ရေရှည် လေ့လာစောင့်ကြည့်ရန်၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ အတွင်း ထင်သာမြင်သာမှု ရှိစေရန် အစီရင်ခံစာက တိုက်တွန်းထားသည်။
Posted by myu shadan at 2:08 PM No comments:
တရုတ်နယ်စပ် ဖြတ်သန်းခွင့်စာအုပ် အတုဟုဆိုကာ မူစယ်တွင် သိမ်းဆည်း
တရုတ် - မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် သျှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) မူစယ်မြို့ ဆင်ဖြူဂိတ်တွင် ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် လွယ် ဂျယ်မြို့မှ ထုတ်ပေးသည့် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဖြတ်သန်းခွင့် စာအုပ်များကို အတုဟု ဆိုကာ သိမ်းဆည်းမှုများ ပြုလုပ်နေ ကြောင်း စုံစမ်းသိရသည် ။
လွယ်ဂျယ်နယ်စပ်ဂိတ်မှ ထုတ်ပေးသည့် နယ်စပ် ဖြတ်သန်းခွင့် စာအုပ်ကိုင်ဆောင်သူများ မူစယ်မြို့ ဆင်ဖြူဂိတ်ပေါက်မှ တဆင့် တရုတ်နိုင်ငံ ကျယ်ဂေါင်မြို့သို့ ၀င်ရောက်ရာတွင် ဂိတ်တာဝန်ကျ မြန်မာ ဝန်ထမ်းများက သိမ်းဆည်းနေခြင်း ဖြစ် သည် ။
ယခုလ ၁၆ ရက်နေ့ တစ်ရက်အတွင်း စာအုပ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ခန့်ကို သိမ်းယူခဲ့ကြောင်း အကြားအမြင် များသည့် မူစယ် ဒေသခံကုန်သည်တစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည် ။
“ဒီလထဲမှာ နည်းနည်းခြင်း သိမ်းနေတယ်။ ၁၆ ရက်နေ့ကတော့ တစ်ရက်ထဲ စာအုပ် ၃၀ ကျော်ကို သိမ်း လိုက်တယ်။ လူကိုတော့ အရေးမယူဘူး” ဟု ဆိုသည် ။
၄င်းနယ်စပ်ဖြတ်သန်းခွင့် စာအုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ မူစယ်ဒေသခံနောက်တစ်ဦးက ပြောရာတွင် “ တကယ် တော့ လွယ်ဂျယ် ဘက်က ထုတ်ပေးတဲ့စာအုပ်တွေက အတုမဟုတ်ပါဘူး။ အတုဆိုရင် ဒီစာအုပ်ဘယ်က ထွက်တယ်ဆိုတာ သိနေတာပဲ။ သူတို့လဝက အချင်းချင်းပညာပြတာတဲ့ သဘောဖြစ်မှာပါ ” ဟု ဆိုသည် ။
မူစယ်မြို့နယ်စပ်ဂိတ်တွင် သျှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) အိမ်ထောင်စုစာရင်းရှိသူများကိုသာ အဆိုပါစာအုပ် ထုတ်ပေးကြောင်း သိရသည် ။
သို့သော် ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှလာသည့် မွတ်စလင်လူမျိုးများ မူစယ်အာဏာပိုင်များထံငွေပေး၍ အဆိုပါ စာအုပ်ပြု လုပ် နေကြောင်း ဆိုသည် ။
“ဒီစာအုပ်ရှိမှ အဆင်ပြေတာဆိုတော့ ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကို တရားဝင်ထုတ်ပေး သင့်ပါ တယ်။ စာအုပ်မရှိလို့ ခိုး ၀င် တယ်ဆိုရင် တစ်ဘက်နိုင်ငံက ဖမ်းမိတော့ ကိုယ့်ပြည်သူတွေပဲ ဒုက္ခ ရောက်ရတယ် ” ဟု ဆိုသည် ။
အဆိုပါ စာအုပ်ကိုင်ဆောင်သူများသည် တရုတ်နိုင်ငံ တယ်ဟုန်ခရိုင်အတွင်း တစ်ပတ်ခန့် ဖြတ်သန်းသွား လာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by myu shadan at 2:05 PM No comments:
Myen Hpyen dapamajan hkyen ai ladat hpe yu maram yu ga .(Battle of Wakahaung Karen State (Myanmar Victory over Rebels & Students ...
Posted by myu shadan at 1:52 PM No comments:
- ရေကြည်အိုင်လိုမျိုး နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ စစ်ကြောရေး စခန်းတွေက ငရဲခန်း နှိပ်စက်ခန်း တွေဟာ သူ့ စနက်တွေ ချည်းပါပဲ။ ဆိုင်ကယ် မောင်းခိုင်း တာက အစ သောက်တဲ့ ရေထဲ မာကျူရီ ထည့်ပြီး ဦးနှောက် ပျက်အောင် လုပ်တဲ့ အထိ ဆိုးရွား ခဲ့တာ သူပါပဲ။
- သေနတ် ရှိမှ နေရာ မြဲတဲ့ စစ်တပ် ထဲမှာ စစ် ကောင်းကောင်း မတိုက်တတ်၊ စစ်တပ် ကျောထောက် နောက်ခံ မရှိတဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ဟာ သူ့ အခြေအနေ မကောင်းဘူး ဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေး အုပ်စုတွေနဲ့ စစ်ပြေငြိမ်းရေး လုပ်တာကို ဘန်းပြပြီး ဘိန်းမှောင်ခို အဖွဲ့ ၊ လက်နက်ကိုင် သူပုန် အဖွဲ့ တချို့ကို ငြိမ်း အဖွဲ့တွေ အဖြစ် ဖန်တီးပြီး ကျောထောက် နောက်ခံ ရအောင် ကြိုးစား ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုးကန့် တို့ဟာ မြန်မာ လူမျိုးထဲတောင် ပါဝင်ခွင့် ရခဲ့ ပါတယ်။ သူ့ ကြောင့် ငြိမ်း အဖွဲ့တွေ သူတလူ ငါတမင်း လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်တာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ စစ်တပ် ကျောထောက် နောက်ခံ မရှိတဲ့ သူအဖို့ ဒီလို ရည်ရှည် သွားတာဟာ နောက်ဆုံး သူ ဒုက္ခ ရောက်မယ် ဆိုတာကို သဘောပေါက် လာပါတယ်။
- ၁ - စစ်အစိုးရ တတ်ခါစမှာ သူ တစ်ဦးတည်းမှာ ပါဝါ အပြည့် ရှိတယ်လို့ ပြောလို့ ရလောက်အောင်ကို ပါဝါရှိပါတယ်… အဲ့အချိန်က သူဆန္ဒပြ ကျောင်းသားတွေ NLD နဲ့ လူ့ဘောင်သစ် ပါတီဝင်တွေကို ဘယ်လို့ ဘ၀တွေ ရိုက်ချိုး ခဲ့တယ် ဆိုတာ ပြန်ပြောပြဖို့ လိုမယ် မထင်ပါဘူး… မန္တလေး သံဃာ့ အရေးအခင်း ကနေစပြီး သံဃာတွေကို ဘယ်လိုသူ ထောင်သွင်း အကျဉ်းချ ခဲ့ပါသလဲ….
- အခုတောင် ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ အရင် ထောက်လှမ်းရေး အတွက် အသုံးတော် ခံခဲ့တဲ့ 7days ၊ voice ၊ eleven တို့က တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မင်းကိုနိုင် တပုံ သူ့ ပုံ တပုံ တင်ပြီး စည်းရုံးရေး ဆင်းနေပါပြီ… အားလုံး ကလည်း ဘဘကြီး နေကောင်းလားတို့ အရမ်း ၀မ်းသာတာဘဲတို့ ဖြစ်ကုန်ကြရော…. ကျုပ်တို့ လူမျိုး ကလည်း မေ့တတ်တာကို…. ၁၉၈၈ အရေးအခင်း ဖြစ်တယ်… အရေးအခင်း ပြီးတာနဲ့ အရပ်ထဲ နတ်ပွဲတွေနဲ့ တခြိမ်းခြိမ်းပေါ့… မေ့ကုန်ပြီ… မသေတဲ့ မိသားစု တွေက… ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်တယ်… မနက်ဖြန်ဘဲ ပေးမလိုလို လုပ်နေလိုက်တယ်…
ကြားထဲမှာ ဖမ်းလိုက်တာ မနည်းမနော… အမှတ် မမှားရင် လွတ်တော် ခေါ်မယ်ကို ၁၉၉၁ - ၉၂ နှစ် လောက်မှ ကြေငြာတာ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးတယ်… ၁၉၉၃ ညီလာခံ ခေါ်တယ်… တနှစ် တကြိမ် တခါတလေ ၂ - ၃ကြိမ် ခေါ်တယ်… လူတွေ ဆူပူမှာ ဆိုးလို့ မြို့တော်ဝန် မာရသွန်….. ပြေးလိုက်ကြ တာဘဲ… တီကို ကားရအောင်လို့…. နအဖ ဖလား လှေသဘင်၊ မြင်းခင်း သဘင်၊ ဟောပြီးတော့ အမျိုးသား အားကစား ပွဲတော်၊ နောက်တော့ ကျောင်းသား အားကစား ပွဲတော် လုပ်ပေးတယ်၊ ဒါတွေဟာ ပုံမှန်ပါဘဲ…
- နောက်တခု မိခင်နဲ့ ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး အသင်း… ဒါဟာ တပ်တွင်း အားပြိုင်ဖို့လောက် နေရာ တခုပါ… အဲ့လိုနေရာမှာ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် တို့က မတိုးဘူးလေ… သူ့ မိန်းမက ဒေါက်တာ ဆိုတော့ ပိုပြီး လူဝင်ဆန့်တော့ ဒါကို တည်ခဲ့တာဘဲ…. နောက် အတန်း ပညာရေးကို ဘယ်လောက်ထိ ဖျက်ဆီး ပစ်တယ် ဆိုတာ အားလုံး အသိပါ… မအောင် မနေရ အတန်းတင် ပညာရေး စနစ်ဟာ သူ့ကြောင့် ပေါ်ထွန်း လာတာပါ။ အဲ့ဒီ ပညာရေး စနစ်က ထွက်လာတဲ့ သူတွေ အခု အချိန်ထိ နိုင်ငံတကာမှာ ဘွဲ့ခြင်း တူရင် ဒီပလိုမာခြင်း တူရင် ဘယ်သူက ခေါင်းမော့ ရင်ကော့ ရပ်တည် နိုင်ပါသလဲ… ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် မပြင်ထားရင် ဘာအဆင့်မှ မရှိလောက်အောင် အနှိမ်ခံရပါမယ်… အဲ့လောက် ဆိုရင် သူ့ ဘာလဲသိလောက်ပါပြီ…
- ရွှေဝါရောင်ရဲ့ အရှေ့မှာ ၉၆ ကျောင်းသား အရေးအခင်း ဆိုတာ ရှိခဲ့တယ်ကွယ့်။ ဘယ်သူမှ အတိအကျ မသိဘဲလို့ ဆိုရအောင် အဲဒီ ကျောင်းသားတွေ မသေသေးဘူးကွယ့်။ အဲဒီ သူကြီးလဲ အပြင်ဘက်မှာ အရှင် လတ်လတ်ကြီး ညွှန်ကြား နေတာကွယ့်။ လှည်းတန်းမှာ နံနက် လင်းအားကြီး ကတ္တရာ လမ်းပေါ်ထိုင် လက်ချင်း ချိတ်တွဲ ထားတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို မီးသတ်ပိုက်နဲ့ အနီးကပ် အတင်း ထိုးခွဲ ကားပေါ် ပစ်တင်ခိုင်းတာ အခု ရွှေဘို ထောင်က လွှတ်တဲ့ထဲ ပါတဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွှန့် လက်ရုံး ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်အောင်တဲ့။ အဲဒီတုန်းက ဗမခ မဟုတ်သေးဘူး ထင်တယ်။ အမိန့်ရ အနီးကပ် ညွှန်ကြား သူပေါ့။ ထောက်လှန်းရေး တစ်စု ရက်ရက် စက်စက် နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ မန္တလေး သံဃာ့ အရေးအခင်း ဆိုတာလဲ မှီလိုက်သူတွေ ရှိသေးတယ်ကွယ့်။
- ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ အဘညွှန့်ရဲ့ ဘုန်းတော် ဘွဲ့တွေ ရွတ်နေကြ ပါစေ ကျနော်တော့ သူ့မျက်နှာ မြင်တာနဲ့ ပထမဆုံး ပြေးမြင် မိတာက ကိုတင်နွယ် ဆိုတဲ့ ဇိမ်ခေါင်းကြီးပဲ။
- မခံခဲ့ရဘူးတဲ့ သူတွေကတော့ ခံခဲ့ရတဲ့ အမြင်ကို ဘယ်သိ မလဲဗျ။ မိသားစုတွေ သားတကွဲ၊ မယားတကွဲ.. ဖြစ်ခဲ့တာတွေ၊ လူဘ၀ သက်တမ်း တ၀က်လောက်ကို ထောင်ထဲမှာ ကုန်ဆုံးခဲ့ရတာတွေ၊ ကိုယ့်အိမ် ကိုယ်နေတာတောင် ကြီးလန့်စာ စားနေ ခဲ့ရတာတွေ၊.. ပြောရရင်တော့ ကုန်မှာတောင် မဟုတ်ဘူး။ ဒီလို လူမျိုးကို အကာအကွယ် ပေးတဲ့ သူတွေ facebook ပေါ်မှာလဲ အတော်များသား ကလား။ ဒီလူကြီးရဲ့ လက်တံက တော်တော် ရှည်သေးတာ တွေ့ရပါတယ်။ (သူတပည့် ဟောင်းတွေ တော်တော် များများလဲ facebook ပေါ်ရှိနေတာ သေချာတယ်) ထောက်လှမ်းရေး ဆိုတဲ့ အတိုင်း ဉာဏ်နီ ဉာဏ်နက်၊ ကလိမ်ကကျစ် ဉာဏ်ကတော့ တော်တော် ကြောက်ဖို့ ကောင်းရိုး အမှန်ပဲ။ မြွေပွေးလို လူမျိုးပါ။ ဒီလူကြီး အခုလို ထောင်ကျတာလဲ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် မဟုတ်ပါ။
- တစ်ခါ တစ်လေ တော့လည်း ကိုယ်လည်း ရန် ငါ ပြတ်သူ ဖြစ်ချင် လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါဟာလူ၊ တိရစ္ဆာန် မဟုတ်ဘူး လို့ ပြန်စဉ်းစား လိုက်မိရင် ရန် ငါ မပြတ်နိုင်သူ ပြန်ဖြစ် သွားတယ်။ လူ အဖြစ်ကို အဆုံးရှုံး ခံပြီးမှရမဲ့ အနိုင် ထိုက်တန်ရဲ့လား တစ်ကယ်ကော လိုခြင်ရဲ့လားလို့ ပြန်စဉ်းစား စရာတွေ ဖြစ်လာ ခဲ့တယ်။
- ဦးခင်ညွှန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမိုင်းကြောင်းတွေ ကောင်း သလား ဆိုး သလား တော် သလား ဆိုတာတွေ ဆွေးနွေးခြင်ရင် နိုင်ငံရေး သရက်ထဲမှာ သူ့အမည်နဲ့ သီးခြား တစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲသည်ဖက်မှာ ဆိုရင် ပိုပြီး သင့်လျှော်လေ မလားလို့ အကြံ ပေးတာပါ။ ကျတော် ဂရုပြု မိသလောက် အမည်ကျော်တွေ ထဲမှာ ကိုယ်ကိုယ့်ကိုယ် publicity ဖြစ်အောင် promotion ကို သေသေချာချာ စဉ်စားပြီး စနစ်တစ်ကျနဲ့ အချိန် အကုန်ခံပြီး လုပ်ယူတဲ့ လူ နှစ်ယောက်ကို တွေ့မိတယ်။ တစ်ယောက်က ကျော်ဟိန်းပါ။ သူ ဘုန်းကြီး မ၀တ်ခင် နှစ် အနည်းငယ် အလိုမှာ နှစ်ရှည် ပလန်ချပြီး စနစ်တစ်ကျ လုပ်သွားတာပါ။ နောက် တစ်ယောက် အခု မြို့မေတ္တာ ခံယူ နေသူကြီးပါ။
- ခင်ညွန့် ပြုတ်တာ ၂၀၀၄ နှောင်းပိုင်းပါ။ မပြုတ်ခင် လပိုင်း အလိုမှာ ခင်ညွန့်နဲ့ ထောက်လှမ်းရေး တဖွဲ့လုံးကို ဒေါက် ဖြုတ်ရာမှာ အဓိက ဇာတ်ကောင်လုိ့ စွပ်စွဲ ခံရတဲ့ ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်ချုပ် ကျော်ဝင်းက သူ့မယားငယ် ရီရီသာကို အမေရိကန် ပုို့ပါတယ်။ ရီရီသာက အမေရိကန်ကို ၀င်တဲ့ နေရာမှာ ကျော်ဝင်း ခိုးဝှက် ထားတဲ့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း များစွာ (ဆယ် ဂဏန်းလို့ နီးစပ် သူတွေက မှန်းပါတယ်) နဲ့ ၀င်ပါတယ်။ ဒီ အချိန်မှာ ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထွဋ် က ၀ါရှင်တန် မြန်မာ သံရုံးမှာ ရှိနေတုံးပါ။
အသောက အသောက အသောကfacebook
Posted by myu shadan at 1:50 PM No comments:
ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့.... ငရဲခန်းက ကျွတ်ပါအုံးမလား...
Posted by myu shadan at 5:03 PM No comments:
အတွင်း ကြိတ်က စခဲ့ကြ။
နိူင်ငံလုံး မြန်မာ - မြန်မာ
လူမျိုးကြီး ဝါဒ အကြံစုတ်။
နှောက်ယှက် ကင်းဖို့ သူ့မျက်လှည့်။
လက်နက် ရိက္ခာ ပို့တလျှောက်
နောက်ဆုံး သိမ်းပိုက်ဖို့ ချိန်ထား
Posted by myu shadan at 4:59 PM No comments:
Posted by myu shadan at 4:57 PM No comments:
သူ့ဟာသူ လူကြီးလူကောင်းလိုလိုပြော... သူ့ဟာသူ ကြွားလုံးထုတ်ပြီးတော့ လုပ်နေတာတွေက လူတွေရွံစရာကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေပဲ သူလုပ်တတ်တယ်... ပါးစပ်က ဘုရားဘုရား.. လက်က ကိုးရိုးကားရား... သူဟာ ငရဲပြည်က လူမသိသူမသိထွတ်ပြေးနေတဲ့ ခွေးဖြစ်ပါတယ်... ၀ိုင်းဖမ်းပြီး ပြန်ပို့ပေးကြပါ... ဆိုပြီး အင်္ဂလိပ်လို သရော်ထားတဲ့ ကဗျာလေးပါ။...
အခု သတ်မတော်ကြီးလဲ ငရဲခွေးလွတ်နေတဲ့ အတိုင်းပါပဲ.... အထိန်းအကွပ်မဲ့... သူ့ဟာသူ ပြည်ထောင်စုရဲ့ ကယ်တင်ရှင်ကြီးလိုလို ပြောလိုပြော... လက်မတင်လေးကယ်ခဲ့ပါသတဲ့... ဟုတ်တော့လဲ ဟုတ်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ပြည်သူ့အာဏာကို ကယ်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်... အာဏာရှင်တွေရဲ့ အချုပ်အချာ အာဏာကို စဉ်ဆက်မပျက် ကယ်ခဲ့တာပါ... ပြည်သူ့အားနဲ့ အာဏာရှင် ပြုတ်တော့မယ် ဆိုတာနဲ့ သတ်မတော်ကြီးက ချီလာပါပြီ.... လက်မတင်လေးမှာပဲ အာဏာရှင်အတွက် ကယ်ကယ်ပေးခဲ့တာ... သူများနိုင်ငံတွေလို လက်ရှိရာထူးရနေတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ပြည်သူဖက်က မားမားမတ်မတ် ရပ်ပြီး အာဏာရှင် ဖြုတ်ချရေး ဦးဆောင်ခဲ့သူ မရှိခဲ့၊ ရာထူးပြုတ်မှပဲ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ပြည်သူ ချစ်ပြနေတဲ့ ဗိုလ်ပြုတ်တွေလောက်ပဲ ရှိတယ်... မြန်မာ ပြည်သူတွေ ခင်မျာ ငရဲတွင်းထဲကကို မကျွတ်နိုင်တော့ဘူး....
ကချင်ပြည်မှာ ၂၀၁၁ ဇွန်လ ကတည်းက လွတ်နေခဲ့တာ... လွတ်တော်အမိန့်လဲ မပါ... သမ္မတ အမိန့်လဲ မနာပဲ.. ထင်ရာဆိုင်းနေခဲ့ရာက.. သမ္မတ နဲ့ လွတ်တော်က ငပေါကြီးတွေ ဖြစ်လို့... ထုတ်လိုက်ရတဲ့ အမိန့် နဲ့ တိုက်တွန်းစာ... သမ္မတ နဲ့ လွတ်တော်က စစ်တပ်ကို စစ်ပွဲရပ်အောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်တာ မြန်မာ တနိုင်ငံထဲ ရှိအုံးမှာပါ။ တိုက်နေတာဖြင့် ၂၀၁၁ ဇွန်လ ကတည်းက... လွတ်တော်မှာ Bullet ကမ်းဖို့ ဖွတ်အမတ် တိုက်တွန်းနေတာက ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာလမှာ...
အခုတော့ ရှမ်းကို ရောက်နေပြီ.....
ကဲ... အဲဒီ ငရဲခွေးကို ဘယ်သူတွေက အမိန့်ပေးပြီး ... ဘယ်လူမျိုးတွေက တိုက်ခိုင်းနေပါလိမ့်.... ရှမ်းသမ္မတ တိုက်ခိုင်းမယ်လို့တော့ မထင်.. ကချင်အမတ်တွေလဲ မဖြစ်နိုင်... ဘယ်တိုင်းရင်းသား အမတ်တွေမှ စစ်ပွဲဆိုတာ စိတ်မ၀င်စားပါ.... ဖွတ်အမတ်တွေကော သိပါသေးလား... အန်အယ်ဒီ အမတ်တွေကော??? ဘယ်လွတ်တော် အမတ်မှလဲ ပြောသံ မကြားသေးပါဘူး... ဒီတော့... အခု ရှမ်းပြည်မှာ ရောက်နေတဲ့ ငရဲခွေးတွေက ဘယ် ပြည်သူတွေရဲ့ လခ စားတွေလဲ....
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ စရိတ်ငြိမ်း နဲ့ လစာ အများဆုံးက စစ်တပ်ပါ။ ဒါကိုများ ကိုယ်ကျိုးစွန့်တယ်လေး... ဘာလေး လုပ်နေသေးတယ်....
ခင်များတို့ဟာ ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံတော်ကို စနစ်မကျ ဖျက်စီး နေတဲ့ ငရဲခွေးတွေဖြစ်တယ် ဆိုတာ သိပါသလား....
Posted by myu shadan at 4:47 PM No comments:
မန္တလေး မဟာအောင်မြေကျောက်မျက်ဝိုင်းတွင် ကျောက်အရောင်းဝယ် လုပ်နေသူများကို တွေ့မြင်ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – မန်းသားလေး / ဧရာဝတီ)
Posted by myu shadan at 4:45 PM No comments:
လက်ရှိ အင်းတော်ကြီးအိုင် မြင်ကွင်း တစိတ်တဒေသ (ဓာတ်ပုံ – နန်းသီရိလွင် / ဧရာဝတီ)
Posted by myu shadan at 4:42 PM No comments:
နိုင်ငံသား တစ်ယောက်ချင်းရဲ့ အသိကညာ မြင့်မားမှု နဲ့ နိုင်ငံတိုးတက်မှု ဆက်နွယ်ခြင်း။
ကမ္ဘာမှာ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ ဖြစ်လာပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများလာလို့ အလိုလို တိုးတက်လာတာ မရှိပါဘူး။ နိုင်ငံသား တစ်ယောက်ချင်းရဲ့ စိတ်ဓါတ်အခြေခံကလဲ အရေးကြီးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလို စနစ်တကျ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖျက်ဆီးထားတဲ့ နိုင်ငံအဖို့ ပိုပြီး နှစ်ဆ သုံးဆ ကြိုးစားရမှာပါ။
ဂျပန် နိုင်ငံ နဲ့ ဂျာမဏီ နိုင်ငံက ဥပမာ နှစ်ခုကိုပဲ ဖေါ်ပြချင်ပါတယ်။
ဂျပန် နိုင်ငံမှာ အလုပ်သွားလုပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ယေဘုယ အားဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံထဲမှာ သူဌေးစာရင်း သွင်းထားပါတယ်။ တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံသားများ (အားလုံးမဟုတ်၊ အများပိုင်း) ဂျပန်နိုင်ငံမှာ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေဟာ ဂျပန် နိုင်ငံသားတွေ မလုပ်ချင်တဲ့ 3D (ရုပ်ရှင်မဟုတ်ပါ) အလုပ်တွေပါ။ 3D ဆိုတာကိုတော့ အထူးတလေ မရှင်းပြတော့ပါဘူး၊ နာမည်ကြီးပြီးသား မို့လို့ပါ။ (ဂျပန်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ လူတွေကို စော်ကားလိုခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဖြစ်ရပ်မှန်တခုကို တင်ပြလိုခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။)
ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို ကွာသွားသလဲ.... ဂျပန်တွ အလုပ်ကျိုးစားကြတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ကျိုးစားခြင်း တခုထဲတော့ မဟုတ်။ သူတို့မှာ စံနမူနာ ယူစရာ အများကြီးရှိတဲ့ အနက် တခုကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
ဂျပန်မှာ အမိုက်ပစ်မယ် ဆိုရင် အမိုက်ပုံး အမျိုးအစား တစ်မျိုးထက်မက ထားပေးတာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ (မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ တမျိုးတွေ့ဖို့တောင် အနိုင်နိုင်)။ အဲဒီ အမိုက်ပုံးထဲကို ထည့်ရမဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးအစား ကို အမိုက်ပုံးရှေ့မှာ ရေးထား (ပုံနဲ့တကွ) ပါတယ်။ အနဲဆုံးသုံးမျိုးတွေ့ရတတ်တာကတော့... (၁) ပလားစတစ် (၀ါ) မဆွေးမည့်တတ်တဲ့ ပစ္စည်းများထည့်ရန်။ (၂) ပြန်သုံးလို့ရမဲ့ ပစ္စည်းများ၊ သောက်ရေဗူးခွံ၊ အချိုရည်ဗူးခွံများ။ (၃) ပုပ်သိုးလွယ်တဲ့ အမျိုးအစားများ။..... စသည်ဖြင့်ပါ။
ဒီတော့... လူတွေကော လိုက်နာပါ့မလား... ဘယ်သူက စောင့်ကြည့်နေလဲ... မှားထည့်မိရင် ဒဏ်ငွေဆောင်ရသလား....
ဒဏ်ငွေလဲ မဆောင်ရပါ... လူတစ်ယောက်မှလဲ တာဝန်ယူပြီး စောင့်ကြည့်မနေနိုင်ပါ... ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ခန့်ဖို့ လစာက မနဲဘူး... လူတိုင်းက အသိစိတ် ရှိရှိနဲ့ ထည့်ပါတယ်။ မှားထည့်တဲ့ ပစ္စည်းရှိတယ် ဆိုရင် ဂျပန် မဟုတ်ဘူး.. လို့ တွက်ကြပါတယ်။ ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ အမိုက်ပုံးမှာ ပစ်မဲ့ ဗူးခွံအထဲမှာ အနံ့ဆိုးထွက်မဲ့ အရည်မျိုးပါရင် ရေဆေးပြီးမှပဲ ပစ်လေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ဘယ်သူမှ မြင်မဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါ။ အဲဒါကြောင့် ဂျပန်တွေက ဘယ်နေရာ နိုင်ငံခြားသား ပိုများသလဲ ဆိုတာ သိရအောင် အမိုက်ပုံးမှာ ကြည့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဂျာမဏီ နိုင်ငံက မြို့ပတ် ရထားတွေ အကြောင်း ပြန်စလိုက်ရအောင်....
ဂျာမဏီ ရထားဘူတာ တွေမှာ ထူးခြားချက်က ရထားပေါ်တက်လမ်းတစ်လျှောက် စင်ကာပူ ဘူတာ တွေမှာလို ပိုက်ဆံထည့် (သို့) စမတ်ကတ် တခုခု ကပ်လိုက်မှ ဖွင့်လာတဲ့ တံခါးမျိုးလဲ မရှိသလို... လက်မှတ်စစ်လဲ မထားပါဘူး။ လမ်းဘေးမှာ မထင်မရှားနဲ့ ရှာယူရတာက လက်မှတ်ရောင်းတဲ့ စက်ကလေးပါ။ ကိုယ့်ပျက်ဆံ နဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘယ်သွားမယ် ဆိုတာ နှိပ်ပြီး လက်မှတ်ဝယ်တယ်။ ပြီးတော့ လက်မှတ်ပြစရာ မလိုတဲ့ ရထားပေါ် တက်စီးသွားပါတယ်။ လက်မှတ်မ၀ယ်ပဲ စီးသွားလဲ ဘယ်သူမှ တိုင်ပြောမဲ့လူလဲ မရှိသလို၊ ဖမ်းမဲ့လူလဲ မရှိပါဘူး။ အခါအားလျှော်စွာ တွေ့ရခဲတဲ့ လက်မှတ်စစ် တနှစ်တခါ ပေါ်လာတတ်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တသက်နေလို့ လက်မှတ်စစ် တခါမှ မတွေ့ဖူးတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေလဲ အများကြီးပါ။ လူအများပိုင်းက တစ်နှစ်လက်မှတ်လုပ်ထားပြီး စီးကြတယ်။ တစ်နှစ်လုံး တခါမှ လက်မှတ် ၀ယ်စရာမလိုတော့ တခါတလေ တစ်နှစ်လက်မှတ်တောင် အိမ်မှာ မေ့ကျန်ခဲ့တာတွေ ရှိတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဂျာမဏီ နိုင်ငံသားတွေက စည်းကမ်း ရှိတယ်။ တစ်ယောက်မှ အချောင် မစီးဘူး။ အချောင်စီးတတ်တဲ့ လူအများပိုင်းဟာ အာရှနိုင်ငံသားတွေပဲ ဖြစ်ပါသတဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံလဲ ကမ္ဘာမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ဥပဒေမဲ့ လူသတ်မှုတွေ၊ ဖမ်းဆီးထောင်ချမှုတွေ၊ မဒိမ်းမှုတွေ၊ အကတိလိုက်စားမှုတွေ၊ လိမ်ညာမှုတွေပါ။
ဒီတော့ ဒို့နိုင်ငံလဲ တိုးတက်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ရွှေနိုင်ငံသား တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ စိတ်ဓါတ်တော့ အရေးကြီးလာပြီနော့။ မိုးကျရွှေကိုယ်တော့ လုပ်လို့မရဘူး။
Posted by myu shadan at 4:35 PM No comments:
မိုင်ဂျာယန်ဒေသရှိ နေရပ်ပြန် ကချင်ဒုက္ခသည်များ ဆေးဝါး ကုသမှုလိုအပ်
ကချင်ပြည်နယ် မိုင်ဂျာယန်ဒေသ၌ စစ်ပြေးတိမ်းရှောင် ခဲ့ရာမှ နေရပ်ကျေးရွာများသို့ ပြန်လည်နေထိုင်သည့် ကချင် ဒုက္ခသည်များသည် ဆေးဝါးများလိုအပ်လျှက်ရှိ သည်ဟု ထိုဒေသတွင် သွားရောက်ဆေးဝါး ကုသပေးနေသည့် ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး-ထိုင်းနိုင်ငံ(KWAT) က ပြောသည်။ ကချင်ဒေသတွင် ယခင်လ ဇန်န၀ါရီလက စစ်ပွဲဖြစ်ပွားမှု ငြိမ်သက်လာသည့်နောက်ပိုင်း နေရပ်ပြန်နေသည့် ဒေသခံများသည် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် နေထိုင်တုန်းကကဲ့သို့ ဆေးဝါးလုံလောက်မှု မရရှိသည့်အပြင် သွား ရောက်ကူညီပေးမည့်သူလည်း မရှိကြောင်း ဆေးဝါးသွားရောက်ကုသနေသည့် KWAT မှ ဆေးဝန်ထမ်းအမျိုး သမီးတဦးဖြစ်သူ ဒွဲဇင်က ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
“ကျမတို့ မနေ့က မိုင်ကျုံမှာ ဆေးလိုက်ကုတယ်။ ဒီနေ့တော့ ဘွမ်ကထော်မှာ ကုတယ်။ တရွာသွားကုရင် လူနာ က ငါးဆယ်နဲ့ ငါးဆယ်အထက် ရှိတယ်။ ကျမတို့ ရွာတိုင်းတော့ သွားဖို့ အခက်အခဲ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် အခြား ကူညီတဲ့ အဖွဲ့တွေလည်း လာကူညီကြဖို့ ကျမတို့ မျှော်လင့်တယ်”ဟု ဒွဲဇင်က ပြောဆိုသည်။
မိုင်ဂျာယန်ဒေသရှိ နေရပ်ပြန်သည့် ဒုက္ခသည်များသည် မိုင်ကျုံ၊ ဘွမ်ကထော်၊ ဂျေကော်၊ ပလော်ကော်၊ ဂိုကော်၊ ခါနာယန်နှင့် အူရာပါ အပါအ၀င် ကျေးရွာခန့်ရှိပြီး အဆိုပါ ကျေးရွာများသည် အိမ်ခြေအရေအတွက် ၂၀ မှ ၃၀ ကျော်အထိရှိသည်ဟု သိရသည်။
ဆက်လက်၍ အဆိုပါ ရွာများတွင် သွေးတိုး၊ ထုံကျေခက်ခဲနှင့် နာစေးချောင်းဆိုး ဖြစ်ပွားမှု များပြားလျှက်ရှိပြီး လူနာသည်များသည် အသက်ကြီးရင့်သူ အမျိုးသမီးအများဆုံး ပါဝင်သည်ဟု KWAT က ဆိုသည်။
ဒွဲဇင်က “အခု ရောဂါသည်တွေက လူကြီးများတယ်။ သူတို့ ဆေးကုချင်ရင် အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ခေါင်းပါဒုက္ခသည် စခန်းကို သွားရတယ်။ သွားရင် လမ်းကလည်း မကောင်း၊ တောင်လည်း တက်ရတော့ လူနာတွေအတွက် အဆင်မပြေဘူး။ အထူးသဖြင့် လူနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုင်ကယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဆေးခန်းသွားရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီး တွေအတွက် ပိုခက်ခဲတယ်”ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိ နေရပ်ပြန် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များသည် မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်-KIA တို့အကြား တိုက်ပွဲပြင်းထန်သည့် ကာလအတွင်း မိုင်ဂျာယန်ဒေသရှိ ခေါင်းပါဒုက္ခသည်စခန်းနှင့် အနီးအနားတ၀ိုက် နေရာများတွင် ပုန်းအောင်းနေထိုင်ကြသည်ဟု သိရသည်။
ကချင်ဒေသတွင် ယခင်လ ဇန်န၀ါရီလကုန်ပိုင်းကမှစ၍ တိုက်ပွဲများ ရပ်တန့်သွားသော်လည်း နေရပ်မပြန်ရဲသေး ဘဲ ခေါင်းပါဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ဆက်လက်နေထိုင်သေးသည့် ကချင်ဒုက္ခသည်ဦးရေ ၂,၀၀၀ (နှစ်ထောင်) ကျော် ရှိသေးသည်ဟု KWAT က ဆိုသည်။
Posted by myu shadan at 4:29 PM No comments:
Tsawmyit Nga Rai facebook
Posted by myu shadan at 4:21 PM No comments:
Posted by myu shadan at 4:02 PM No comments:
ကြေးနီစီမံကိန်းဆိုင်ရာ သယံ ဇာတကျိန်စာ ဓါတ်ပုံပြပွဲကျင်းပ
ဖဖော်ဝါရီ ၂၁ရက်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်။ စောထွန်းလင်း
လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် “သယံဇာတကျိန်စာဓါတ်ပုံပြပွဲ”အမည်ရှိ ဓါတ်ပုံပြပွဲ တရပ်ကို ပြည်တွင်းရှိ Green Hearts Environment Network မှ ဦးစီး၍ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ရက်မှ ၂၂ရက်အထိ ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေဂုံတိုင်အနီး တော်ဝင်နှင်း ဆီခမ်းမ၌ ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းက စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။
လက်ပံတောင်းတောင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မည်မျှပျက်စီးနေမှုနှင့် ဒေသခံများ၏ အခက်အခဲကို စာနာနားလည် နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ထိုသို့ ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြပွဲဦးဆောင်ကျင်းပသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ပန်းချီ၊ ဓါတ်ပုံ ဒီဇိုင်း ပညာရှင် ဦးစိုးဝင်းငြိမ်းက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ဦးစိုးဝင်းငြိမ်းက “ဒီပြပွဲကို ကျင်းပတာဟာ လက်ပံတောင်းတောင်မှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေ ဘယ် လောက် ဖြစ်နေတယ်။ လူမှုရေးအခြေအနေတွေ၊ ဒေသခံတွေ ကိုယ့်ဒေသစွန့်ခွာရတော့ လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့ အခက်အခဲတွေရှိ လားဆိုတာကို တင်ပြဖို့ပါ။ ဒီပြပွဲကို အဓိကဒေသခံတွေရဲ့ အခြေအနေကို စာနာနားလည်နိုင် အောင် ကြိုးစားတင်ပြထားပါတယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါ ဓာတ်ပုံပြပွဲတွင် အထူးသဖြင့် ကြေးနီတူးနေပုံ၊ ဒေသခံများ ဆန္ဒပြပုံနှင့် ဒေသခံများ၏ အသက်မွေး ကျောင်း လုပ်ကိုင်ပုံများ ပါဝင်ပြီး တက်ရောက်လာသူများကို ဓါတ်ပုံစာအုပ် ဝေပေးသလို မြန်မာဝမ်ပေါင်ကုမဏီ မှလည်း ၎င်းတို့ လူမှုဆောင်ရွက်ချက် စစ်တမ်းဟုဆိုကာ သတင်းထောက်များကို စာအုပ်လာဝေသွားသည်ဟု သိရသည်။
ပြပွဲ တက်ရောက်ခဲ့သည့် သတင်းထောက်တစ်ဦးက “သူတို့က သူတို့ ဒေသခံတွေကို ဘာတွေလုပ်ပေးတယ် ဆိုတာ စာအုပ်လုပ်ပြီး သတင်းထောက်တွေကို ဓါတ်ပုံ ပြပွဲက ပေးသလိုလိုနဲ့ လာဝေသွားတယ်။ အဲဒီမြန်မာဝမ် ပေါင်ကုမ္ပဏီက အဲ့ဒီမှာ ဦးပိုင်နဲ့ ပေါင်းပြီး ကြေးနီတူးနေတဲ့ ကုမ္ပဏီ ဒီကလှုပ်ရှားမှုကို လာအကဲခတ်တဲ့ သဘောပဲ”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
၎င်းပြပွဲတွင် ဓါတ်ပုံနှင့် ကာတွန်းပေါင်း ၉၀ကျော်ကို ပြသထားပြီး ပြပွဲကျင်းပနေစဉ် နေ့စဉ် မွန်းလွဲ ၂နာရီတွင် ကဗျာရွတ်ပွဲ များကျင်းပသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ပွဲစီစဉ်သူများက ဆိုသည်။
ပြပွဲတွင် ပါဝင်သည့် ဓါတ်ပုံဆရာ မုံရွာဒေသခံ ဦးအံ့မောင်ကလည်း ယခုပြပွဲသည် ကြေးနီတောင်စီမံကိန်း ရပ် တန့်ရေးအတွက် ဖြစ်သလို ကြေးနီစီမံကိန်းသည် အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စဖြစ်ပြီး စီမံကိန်း ဆက်လက် လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါက မြန်မာလူမျိုးများသည် တရုတ်အစိုးရအပေါ် နာကြည်းမုန်းတီးမှု ကြီးမားလာနိုင်သည့် အပြင် မြန်မာ အစိုးရအပါအ၀င် တရုတ်အစိုးရကိုပါ ထိခိုက်မှုရှိနိုင်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ လက်ပံတောင်းတောင်သည် ချင်းတွင်းမြစ်နှင့် တစ်မိုင်ကျော်သာ ကွာဝေးသောကြောင့် စီမံကိန်း စွန့်ပစ် အက်စစ် ရည်များသည် မြစ်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိပြီး ထိုမှတဆင့် ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းသို့ စီးဝင်ကာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအများအပြား ထိခိုက်နိုင်ကြောင်းလည်း ဦးအံ့မောင်က ထောက်ပြပြောဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းထားပြီး ကော်မရှင်၏ အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာကို မတ်လကုန်တွင် ထုတ်ပြန်သွားရန်ှရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted by myu shadan at 3:59 PM No comments:
ထိုင်းဖုန်း 12 call ဖြင့် အင်တာနက်လိုင်းဖွင့်မယ်ဆိုရင်
နာရီ (၁၀၀) ဆိုရင် -၃၅၀-ဘတ် ကျပ် ကျပါမယ် အောက်က ကုဒ်ကိုခေါ်ရပါမယ်
နာရီ (၂၀) ဆိုရင် - ၁၀၀ -ဘတ်
၆ နာရီ ဆိုရင် ၅၀ ဘတ်
၃ နာရီ ၃၀ ဘတ်
Happy Detect ဒီထက်-အတွက် စမာနည်း
detect အတွက်က*1004 ဖြင့်ခေါ်ပါ
mobile internet ရွေးရန်၁ ကိုနှိပ်ပါ
လဖြင့်သုံးရန် ၁ ကိုထပ်ရွေးပါ မိမိသုံးလိုသည့် နာရီကို ရွေးချယ်ရန် ... ၁၂၃၄၅ ထဲမှ ရွေးချယ်ပါ .ဥပမာ နာရီ ၅၀... ၄ နှိပ်ြပီးပါက
အတည်ပြုရန် ၁ ကိုနှိပ်ပါ message ပြန်ဝင်လာရင် သုံးလို့ရပါပြီး ဘာရယ်ညာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး တင်လိုက်တယ်ဆိုတာက ဒီနည်းတွေကို ဖုန်းကိုင်တဲ့ လူတစ်ထောင်မှာ ငါးယောက်မသိပါဘူး ဒါကြောင့်တင်လိုက်တာပါ။
Posted by myu shadan at 3:53 PM No comments:
ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းတွေကို Custom ROM တင်နည်းလေး တစ်ခုပြောကြည့်ရအောင် နည်းကတော့ မြားမြောင်လှပါပေရဲ့ ခုပြောပေးမှာကတော့ လွယ်ကူရိုးရှင်းတာလေးကို ပြောပေးမှာပါ ဘာကြောင့် လွယ်တာပဲ ရွေးပြောရသလဲဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့် စာဖတ်ပရိတ်သတ် တွေက အားလုံးက ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာ မို့ပါ အတန်းစားအသီးသီး က စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ အားလုံးကို ရည်ရွယ်တာမို့ လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ နည်းကို ရွေးပြောပါတယ် ဒါက အမှားနဲအောင်ရယ် နောက်တစ်ချက်က ပထမဆုံး စာဖတ်ပြီး လုပ်ကိုင်သူ ဖြစ်ခဲ့ရင် မ၀ံ့မရဲ လုပ်ရတာ လွယ်လွယ်လေးရသွားရင် နောက်နောင် ထပ်ထပ်ပြီး လုပ်ဖို့ အင်အား တစ်ခု ရလာစေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်
ကဲ အခု ကျွန်တော် လူသုံးများပြီး နာမည်ကြီးတဲ့ Cyanogen Mod ကို တင်တာ လေး ပြောမှာပါ စိတ်ချရမှု အများဆုံး Custom ROM တစ်ခုပါ Custom ROM အကြောင်းကိုတော့ တီးခေါက်မိလောက်အောင် ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာ ရှင်းပြထားပြီးပါပြီ မဖတ်ရသေးသူများ www.akarphyoe.com က မိုဘိုင်းဆိုင်ရာ မှာ ဘာလဲဟ Custom ROM ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ရေးထားပါတယ် ဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ အခုကတော့ Custom ROM ကို တင်နည်းပါ လာပါပြီနော် Custom ROM တွေက ဖုန်းအမျိုးအစား ကိုလိုက်ပြီး သီးသန့် ROM တစ်ခု စီထုတ်ပေးတာပါ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Sansaung ဖုန်း တစ်ခုအတွက်ထုတ်ထားတာကို အခြား Sansaung ဖုန်း တစ်လုံးမှာ တောင် မှ အသုံး ပြုလို့ မရဘူး ဒီသဘောပါ ဒါပဲလား ဆို မဟုတ်သေးဘူးဗျ ROM Update တွေက အချိန်နဲ့ ကိုက်ညီအောင် ကို ထွက်နေတာဆိုတော့ ကိုယ့်ဖုန်းအတွက် ROM ကို http://download.cyanogenmod.com မှာ ရွေးချယ်ဒေါင်းယူ လို့ရပါတယ် ဒေါင်းရင်လဲ နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်ရွေးဒေါင်းပေါ့
ဒေါင်းထားတယ်မှတ်လိုက်ပြီနော် ကဲ အခု ပထမဆုံး ကျွန်တော်တို့ SD Card ကို Custom ROM မတင်မီမှာ အရင် ဖော့မက်ချထားလိုက်ပါမယ် Format ချတာကိုတော့ ကျော်မယ်နော် မလိုတော့ဘူးထင်လို့ ဖော့မက်တောင် မချတတ်သေးရင်တော့ ဒီစာကို ဖတ်နေတာ ဒီနားမှာ ရပ်ထားလိုက်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
နောက် ဖော့မက်ချပြီးတဲ့ အခါမှာ ခုဏဒေါင်းယူထားတဲ့ Custom ROM ရဲ့ Zip file ကို SD ကဒ်ထဲ ကူးထည့်ထားလိုက်ပါ
နောက် ROM manager လေးကို အသုံးပြုပါမယ်
ROM Manager ထဲကနေ Reboot into Recovery ကနေ Clockwork Mod Recovery ကို ၀င်ပါမယ်
နောက် Wipe data/Factory reset အရင်လုပ်ပါ
နောက် wipe cache partition လုပ်ပါ ဒါလုပ်တာက system error တွေကို ရှောင်ချင်လို့ပါ လိုရင်းပဲပြောတာမို့ တိုတိုတုတ်တုတ်ဖြစ်နေချင်ဖြစ်နေပါမယ် အဓိကက တင်တတ်ဖို့ပဲ မဟုတ်လား လျှောက်ပြောမနေတော့ဘူးနော်
နောက် Install zip form sdcard ကို ရွေးပြီး choose zip from sdcard ကိုထပ်ရွေးပေးပါ ဒါဆို Sd card ထဲက File တွေ ဆီရောက်နေပါပြီ အဲထဲကမှ ကိုယ်ဒေါင်းပြီးထည့်ထားတဲ့ Custom ROM ရဲ့ zip file ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ
ClockworkMod Recovery ဟာ သူ့ဘာသာသူ Run ပါလိမ့်မယ် တင်တဲ့ အချိန် ၁၀ မီနစ် ၁၂ မီနစ်ခန့်လောက်တော့ စောင့်ရပါမယ် နောက်ပြီးရင် Reboot system Now ကိုနှိပ်ပြီး Reboot ပြန်လုပ်ပေးပါ
နောက် CyanogenMod ကို loading လုပ်ပါလိမ့်မယ် နဲနဲတော့ ကြာမယ်နော် ပထမဆုံးတက်လာရတာမို့ပါ နောက်ဆိုရင် မြန်ပါတယ် တက်လာတဲ့ အခါမှာ CyanogenMod ကို ကိုယ့်ဖုန်းမှာ မြင်ရပါပြီ ဟိဟိ
ဒီမှာ လက်ဆောင်လေးတွေ နဲနဲ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် ကလိပေါ့ဗျာ ကိုယ်မှားလို့ ကိုယ်ပျက် ရင်ကိုယ့် ပြသနာကိုယ်ရှင်းနော် ကျွန်တော်နဲ့ အဆိုင်ဘူး ကျွန်တော်က နည်းအမှန်ပြောထားပေးတာ ပေါက်ကရလုပ်ရင်တော့ ဟိဟိ ပဲ
Posted by myu shadan at 3:51 PM No comments:
Google Play က Free App တွေကို ကွန်ပျူတာသို့ Download ချနည်း
အခုပြောမယ့်နည်းလေးကတော့ ဖုန်းကနေ google play
ကိုဝင်ပြီး download ဆွဲရတာအဆင်မပြေတဲ့သူတွေအတွက်ပါ ဘာကြောင့်လဲဆို့ မြန်မာမှာဆို လက်ကို မခံတာ အားလုံးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ တော်တော်များများ ၉၈%လောက်က မရပါဘူး ဒီတော့ ဘယ်လိုဒေါင်းမလဲ ဆိုတာကို ခဏခဏလာလာမေး တတ်ကြပါတယ် ဒီပြသနာကို အဆင်ပြေအောင်လို့ ပိုစ့်တစ်ခု တင်ပေးလိုက်တာပါ ဘာမှ ခက်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး မသိလို့ သိရင်လွယ်တယ် မဟုတ်လား ဟီး
ပထမ လိုအပ်တာလေးတွေက တော့
Google Chrome version 20.0 နှင့် အထက် web browsers ကို စက်မှာ အင်စတော လုပ်ထားပါ ဒါကိုတော့ တင်မပေးတော့ပါဘူး အလကားရတာ ဘယ်မှာဒေါင်းဒေါင်းရတယ်လေ
နောက် Apkdownloader လေး ဒေါင်းရပါမယ် အောက်မှာ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်
ကဲ Google Chrome ကို စက်မှာထည့်ထားပြီးပြီလို့ ယူဆထားလိုက်ပြီ ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်
ဒတ်စတော့ပေါ်က Google Chrome အိုင်ကွန်မှာ မြှားတင်ပြီး ညာကလစ်နှိပ်ပါ
နောက် Properties ကို နှိပ်ပါ ပေါ်လာတဲ့နေရာမှာ Shortcut Tab ကိုရွေးလိုက်ပါ
နောက် Target : နေရာက ဘောက်မှာ စာတွေ ရှိပါတယ် အဲစာမှာ ပြင်ရပါမယ် Gtalk ပွားတာနဲ့ ဆင်တူပါတယ် ဖြည့်တဲ့ စာပဲ ကွာသွားတာ ဘာဖြည့်ရမလဲ ဆိုတော့ Chrome.exe နေရာမှာ spacebar ခြားပြီး --ignore-certificate-errors ဆိုတာလေးထည့်ပေးလိုက်ပါ
နောက် OK နှိပ်ပြီး Google Chrome ကို ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ
နောက် Google Chrome ဘယ်ဖက်မှာ Extensions ဆိုတာ ရှိပါတယ် အဲဒါကိုနှိပ်ပါ Apkdownloader လေးမရှိရင် ရှာပေးလိုက် နောက် Apkdownloader အောက်က Option ကို နှိပ်ပါ
နောက် မိမိ မေးလ်ရယ် ပတ်ဝရယ်အဲမှာ ဖြည့်ရမယ် နောက်တစ်ခုက Android ID ကိုဖြည့်ရပါမယ် Android ID က ၁၆ လုံးရှိပါတယ် ဒါကို မိမိ ဖုန်းကနေ ရှာရမှာပါ ရှာပြီးထည့်ပါ မတတ်ရင်လဲ တတ်တဲ့ သူရှာခိုင်းလိုက်နော် ဖုန်းအားလုံးအတွက် ကျွန်တော် ရေးလို့ အဆင်မပြေလို့ပါ
ဖြည့်ပြီးတာနဲ့ login လုပ်ပါ နောက် Sim Operator ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ မိမိကြိုက်ရာနိုင်ငံနဲ့ ဖုန်းလိုင်းကို ရွေးပေးလိုက်ပါ နောက် Save Setting ကိုနှိပ်ပါ
ဒါဆိုရင် ဒေါင်းလို့ရပါပြီ အဲ မရဘူးဆိုရင်တော့ login လုပ်တာကို ပြန်ထွက်ပြီး နှစ်ခါသုံးခါလောက် ပြန်ဝင် ပြန်ထွက်လုပ်ပေးပါ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်
Posted by myu shadan at 3:47 PM No comments:
Posted by myu shadan at 3:38 PM No comments: